राजनीतिभन्दा कृषि प्यारो
scheduleमगलवार कार्तिक २६ गते, २०७६
उमा केसी/रोल्पा, २२ माघ । दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा सामेल थुप्रै युवा शान्ति प्रक्रियासँगै वैदेशिक रोजगारीमा बिदेसिए । त्यही युद्धमा सामेल रोल्पाका एक योद्धाले भने शान्तिपूर्ण राजनीति र व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।
शान्तिकालमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जिल्ला उपाध्यक्ष बनेका धबाङ–३ रोल्पाका ४२ वर्षीय ऋषिराम रोका अलैँची बिरुवा उत्पादन व्यवसायबाट वार्षिक १५ लाख बढी आम्दानी गर्न सफल भएका छन् ।
तत्कालीन युद्धका बेला छापामार रहेका उनी नर्सरी उत्पादन गरेर मनग्य आम्दानी गर्छन । पाँच वर्षअघि धबाङबाट सदरमुकाम लिबाङ आएका उनीले नर्सरीबाट अलैँचीको बिरुवा उत्पादन गरी बिक्री गर्नेे पेसा अँगालेका हुन् । उनले गत वर्षसम्म अर्काको जग्गा भाडामा लिई नर्सरी स्थापना गरेका थिए । यो साल भने आफैँ जग्गा खरिद गरी व्यवसाय गरिरहेका छन् । उनीले अलैँची बिक्रीबाट आएको मुनाफाले जग्गा खरिद गरेका हुन् ।
सहोदर दाइ मूलबहादुरसँग साझेदारीमा सो व्यवसाय गर्दै आएका उनको नर्सरीमा देवदार, श्रीखण्ड, खोटे सल्ला, सागुन, सुगन्ध कोकिला, टिमुर, कान्वातु, अलैँची, किबी, राई खनियोलगायत प्रजातिका बिरुवा छन् । आफ्नो नर्सरीमा तयार भएका बिरुवा जिल्लामा मात्र होइन अन्यत्र पनि माग बढ्दो छ । ‘सल्यान, प्युठान र दैलेखलगायत जिल्लाबाट समेत बिरुवाको माग हुँदै आएको छ’ ऋषिराम भन्छन्, ‘मैले उत्पादन गरेका अलैँचीका बिरुवा रोल्पामै खपत भइरहेको छ । बाहिरको माग पुर्‍याउन सकिएको छैन ।’
उनीले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रोल्पाबाट अलैँची नर्सरीका लागि अनुदान प्राप्त गरी व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । उनको नर्सरीमा उत्पादित बिरुवा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले नै खरिद गर्छ । उनी अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य समेत छन् । कृषि पेसालाई पहिलो र राजनीतिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘विगतमा राजनीति प्यारो लागे पनि अहिले भने कृषि प्यारोे लाग्छ ।’ रोल्पाका किसान अलैँची खेती गर्न आकर्षित हुँदैछन् । जिल्लाको पूर्वोत्तर गाविसको भूबनोट अलैँची उत्पादनका लागि राम्रो रहेकोे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत लालकुमार श्रेष्ठ बताउछन् । थोरै लगानीबाट धेरै आम्दानी हुने तथा धेरै किसानको आकर्षण समेत रहेका कारण जिल्लामा अलैँचीलाई उदीयमान बालीका रुपमा लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि विकास परियोजनामा समेत रोल्पालाई अलैँचीको ब्लक विकास गर्ने तथा पकेट क्षेत्रको विकास गर्ने कार्यक्रम रहेको श्रेष्ठ बताउछन् । अलैँचीलगायत भिन्न प्रजातिका बिरुवामा कृषकलाई बिरुवा उपलब्ध गराउँदा ५० प्रतिशत अनुदान दिइँदै आएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । रासस
रामसुन्दरलाई छोराले कुटपिट गर्दे धक्का दिएर भुइँमा लडाएपछि…
कार्यालय सहयोगीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परे वडाध्यक्ष
गोली चलाएर बैंकका कर्मचारीको ६ लाख लुटियो
अत्यधिक रक्तश्रावका कारण सुत्केरीको ज्यान गयो
एउटै बोकालाई झण्डै ३ लाखमा बेचे रिजालले
रोग पहिचान नगरी शल्यक्रिया गर्दा पाल्पामा बिरामीको मृत्यु
आफ्नै गुप्तचर राख्ने प्रदेश नं. २, विधेयक ल्याउँदै
देश, प्रदेश ३
यसरी हुँदैछ सिसडोलमा १३ वर्षदेखि थुपारिएको फोहोर व्यवस्थापन
टिपर र बोलेरोले मोटरसाइकल च्यापियो, १ को मृत्यु
पर्यटकका लागि कर्णाली राजमार्गमा अग्र्यानिक घरवास
चितवनमा यस्तो छ उपनिर्वाचनको तयारी
हत्याको १७ वर्षपछि पक्राउ परे यी दुई अभियुक्त
बेसहारा सडक मानवमुक्त नगर अभियान शुरु
अलैँचीले बजार नपाएपछि कृषक समस्यामा
निजामती कर्मचारीलाई भ्रमण गर्नका लागि एक महिना बराबरको थप तलब सुविधा
प्रादेशिक अस्पतालले ‘बर्थिङ सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याउने
सुदुरपश्चिमका राज्यमन्त्री रावलले दिए राजीनामा
बाग्लुङमा बागीलाई नेकपाको हेलिकप्टर, लगानी डुब्यो
पण्डितहरुको प्रतिवद्धता- नागरिकता हेरेर मात्र विवाह गराउँछौं
किर्ते गरी करोडौं ठगेको आरोप लागेपछि राज्यमन्त्री रावलद्वारा राजीनामा
अघोरी बाबाकी श्रीमति ५ दिनसम्म हिरासतमै रहने
काठमाडौं, २६ कात्तिक । ‘अघोर बाबा’ भनेर चिनिने विजय केसीकी श्रीमती शारदा पाण्डे ५ दिन हिरासतमा रहने भएकी छिन् । प्रहरीले पाण्डेलाई...
मोदीलाई डा. केसीको चिठीः ‘नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा परेपछि स्तब्ध छु’ (पत्रसहित)
काठमाडौं, २६ कात्तिक । प्रा.डा. गोविन्द केसीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेखेका छन्। उनले डडेल्धुरा अस्पतालमा...
मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न समाजवादीको बैठक कुर्दै प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, २६ कात्तिक । मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने लामो तयारीपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली यसरबारे केही बोलिरहेका छैनन्...
काठमाडौँ, २६ कात्तिक । युभेन्ट्सका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डो एकाएक आलोचकको पात्र बन्न पुगेका छन् । आइतबार भएको...
चीनमा प्रसंशनीय खोज प्रशिक्षणमा जम्दै लामिछाने
काठमाडौं, २६ कात्तिक । तालिम प्रशिक्षण भन्नासाथ विदेशी प्रशिक्षकको कुरा धेरै हुनेगर्छ नेपालमा । तर, नेपालका एक प्रशिक्षक...
यी दुई खेलाडी रियल मड्रिड नफर्किएकै राम्रो
काठमाडौँ, २६ कात्तिक । रियल मड्रिडका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले जेम्स रोद्रिगेज र ग्यारेथ बेलप्रति आफ्नो विश्वास नरहेको...
भारतीय सीमा नजिकैको प्रहरी चौकीमा बम विस्फोट, जवान घाइते
रौतहट, २६ कात्तिक । रौतहटको इशनाथ नगरपालिकामा रहेको मठिया प्रहरी चौकीमा विष्फोट हुँदा १ जना प्रहरी जवान घाइते भएका छन् । रौटहट...
करिम बेन्जेमालाई पछ्याउँदै लियोनल मेस्सी
काठमाडौँ, २६ कात्तिक । स्पेनिस लिग ला लिगमा यस सिजन रियल मड्रिडका स्टार खेलाडी करिम बेन्जेमाको चर्चा चौतर्फी रहेको छ । उनले...